Japàna: Polisy Mitsikilo Ny Miozolmana Na Dia Voaràran’ny Lalàm-Panorenana Aza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2016 3:29 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Ελληνικά, bahasa Indonesia, English
Maoske ao Kobe. Sary an'ny Pete Ford, mpampiasa Flickr. CC BY 2.0.
Ny 31 May 2016, nolavin'ny Fitsaràna Antampony ao Japàna ny raharaha fametraham-panontaniana momba ny maha-ara-dalàna ny fanaovana fanarahana maso sy fakàna ny mombamomba ireo Miozolmana ao Japàna, eny fa na dia tena tsy ara-dalàna amin'ny ankapobeny aza ny fanarahana maso mifototra amin'ny resaka finoana na foko araka ny lalàm-panorenana ao Japàna, izay manipika mafy ny zo hanana fiainana manokana, hanana fiarovana mitovy manoloana ny lalàna, ary ny fahalalahana ara-pinoana. Nanamarika teboka faratampony io, tamin'ireo taona marobe nisian'ny raharaham-pitsaràna nataon'io vondron'ny mpitory io ihany, tany amin'ny fitsaràna samihafa izay nahazoana didy isan-karazany.
Taorian'ilay poritsaka, nitory ny governemanta sy ny polisy ny 17 tamin'ireo Miozolmana voalaza anarana tao anatin'ilay antontan-taratasy, mba hilazàna ny tsy maha-ara-dalàna ilay fitsikilovana. Tamin'ny 2014, neken'ny Fitsaran'ny Distrika ao Tokyo fa nanitsakitsaka ny zon'ireo mpitaraina hanana ny fiainany manokana ilay poritsaka, ary nanome azy ireo 90 tapitrisa Yenn ( eo amin'ny US $900,000) ho onitra. Kanefa, namoaka didy ihany koa ilay fitsaràna hoe “nilaina sy tsy azo nihodivirana” ilay fanangonana vaovao mba hiarovana an'i Japàna amin'ny asa fampihorohoroana iraisampirenena, na eo aza ny lalàm-panorenana manome ny fahalalahana ara-pinoana sy ny fiarovana mitovy manoloana ny lalàna.
Ao amin'ny bilaogy Center for Constitutional Rights, Igeta Daisuke, iray amin'ireo mpiaro ny mpitory tafiditra amin'ilay raharaha, no manoritsoritra amin'ny antsipirihany kokoa ny fidadasik'ilay fandaharanasa fanarahana maso:
Volazan'ireo antontan-taratasy hafa bebe kokoa ao amin'ilay fandaharanasa fanarahana maso fa nanatona akaiky tsy tapaka an'ireo Miozolmana monina ao Japàna ny polisy, nitaky tamin'izy ireo hanome ny mombamomba azy, ary tena nanao asa fitsikilovana tokoa tamin'ny sasany tamin'ireo hafa mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonin-dry zareo. Voalaza fa niantraika tamin'ny fifandraisan'izy ireo tamin'ireo namany, ny mpifanolo-bodirindrina ary ny fianakaviany izany, namela ratra ara-tsaina.
Miaraka amin'ny tsy fisian'ny fanisàn-bahoaka azo raisina, vinavinaina ho misy 100.000 eo ireo olona izay voalaza fa Miozolmana monina ao Japàna. Teratany Japoney ny sasany amin'ireny olona ireny, raha ny hafa kosa mpianatra tsy Japoney sy mponina maharitra manana fifamatorana lalina amin'ilay firenena.
Noho ny Làlan'ny Landy, fandraharahàna ara-barotra, efa mihoatra ny arivo taona no nifandray tamin'ireo faritra be Miozolmana teto amin'izao tontolo izao i Japàna. Kanefa, nila niandry ny fiafaràn'ny fitokana-monina nandritry ny fotoana ela nahazo an'i Japàna tamin'ny taonjato faha-19 sy ny fanombohan'ny fisokafan'ny firenena vao nanomboka niroborobo ny vondrom-piarahamonina Miozolomana tao an-toerana.
Tany amin'ny 1935, nisy maoske iray najoro tao Kobe, ilay seranantsambo goavana fanaovana raharaham-barotra tao andrefana. Naorina tamin'ny 1938 ny maoske Tokyo Camii. Hita aty amin'ny vanim-potoana taorian'ny ady ny fahatongavan'ireo mpifindramonina avy any Bangladesh, Iràna, ary Indonezia sy ireo firenena Miozolmana hafa. Ny sasany tonga hianatra tany amin'ireo sekoly Japoney, raha ny hafa indray tonga hanao asa an-tselika. Ankehitriny dia misy maoske isaky ny faritra tsirairay ao amin'ny firenena.
Ny Novambra 2015, taorian'ilay fanafihana tao Parisy, nisy sary iray mahatsikaiky niely tany anaty aterineto mampiasa ny teny Anglisy, momba ny lisitr'ireo lazaina fa fepetra maneritery napetrak'i Japàna, izay mandràra tokoa ny fifindramonin'ireo Miozolmana. Taty aoriana dia fantatra ny marina momba ilay sary mahatsikaiky. Mahazo alàlana hitsidika, honina ary ho lasa teratany Japoney aza ireo Miozolmana ao Japàna. Nahatonga ireo politisiana toy ny Praiminisitra Abe Shinzo ihany koa hanindry ny maha-zavadehibe ny fifandeferana. Na izany aza, mitohy ihany ilay fandaharanasa fanarahana maso ataon'ny polisy.